Xiriirka ka dhexeeya kuleylka iyo heerkulka | Saadaasha Shabakadda
Xiriirka ka dhexeeya kuleylka iyo heerkulka
Ma taqaan farqiga u dhexeeya kuleylka iyo heerkulka? Badanaa labadan fikradood ayaa midba midka kale ku jahwareersan yahay, oo qaab khaldan loo adeegsanayo. In kasta oo ay si dhow isugu dhow yihiin, haddana iskuma eka. Marka, inkasta oo kuleylku yahay nooc ka mid ah tamarta, tamarta kuleylka, heer kulku waa tayada go'aamisa jihada socodka kuleylka.
Laakiin, Astaamo noocee ah ayuu mid waliba leeyahay? Waxaan ka hadli doonaa tan iyo wax badan oo ka mid ah maqaalkan gaarka ah.
1 Muxuu yahay kuleylka?
2 Qeexida heerkulka
3 Heerkulka Dunida
4 Iyo dareenka kuleylka?
Muxuu yahay kuleylka?
Inta lagu jiro maalmaha qorraxda, iyo gaar ahaan xagaaga, muujinta inta badan aan nidhaahno waa: "intee kulul!", Sax? Hagaag, dareenkan waxaa soo saaray qorraxda, oo ah shey aad uga baaxad weyn meeraha Dunida (wuxuu leeyahay dhexroor dhan 696.000km, halka gurigeenna 'kaliya' uu cabirkiisu yahay 6.371km), aadna uga kulul: 5600ºC, marka la barbar dhigo celceliska 14ºC ee halkaan lagu duubay.
Kuleylka waxaa la dhihi karaa waa a wareejinta tamarta laga bilaabo shey heerkulkiisu sareeyo ilaa mid kale oo 'qabow' badan. Sidaa darteed, labada shay inta udhaxeysa waxaa la gaari doonaa isu-dheelitirnaan heer kul ah, taas oo ah waxa dhaca, tusaale ahaan, markaan sariirta aadno xilliga qaboobaha: go'yaasha iyo bustayaasha ayaa qabow marka hore, laakiin marba marka ka dambeysa way kululaanayaan
Tamarta kuleylka waxaa loo wareejin karaa seddex siyaabood oo kala duwan:
Shucaaca: markuu ku faafo qaab mawjadaha electromagnetic, sida tamarta qoraxda.
Wadista: markuu ku faafo taabashada tooska ah, sida markaan qaadada ku shubno kafee cusub.
Koongareeska: markii lagu faafiyo dareere ama gaas, sida kululeeyayaasha aan ku haysanno guriga.
Iyo, markii la dhammeeyo, sheyga tegi karaa gobol kale, kaas oo noqon kara mid adag, dareere ama gaas. Isbeddeladan waxaa loo yaqaan magaca isbeddelka wajiga, oo si joogto ah u qaabeeya dabeecadda Dunida. Isbeddelada wajiga ugu badan ee saadaasha hawada waa:
Laga soo bilaabo adag ilaa dareeraha, loo yaqaan wajiga.
Dareeraha ilaa adag, loo yaqaan adkeynta.
Laga soo bilaabo dareeraha ilaa gaaska, loo yaqaan uumiga.
Laga soo bilaabo gas ilaa dareeraha, loo yaqaan uumid.
Tamarta kuleylka waxaa lagu cabiraa calories, iyadoo ka soo horjeedda heerkulka lagu cabbiro darajooyinka (ama Kelvin, Celsius ama Fahrenheit), ama sidoo kale Joules (1 Luulyo waxay u dhigantaa 0,23 kalori qiyaastii).
Heerkulku waa a hantida maaddada ee lagu cabiro heerkulbeegga. Markuu shay ugu dhowaado kuleyl kale, heer kulka ayaa kici doona. Annaga qudheennu, tusaale ahaan markaan jiran nahay oo aan qandho qabno, heerkulka jidhkeennu sidoo kale wuu kordhayaa.
Waxaa jira saddex miisaan oo cabiraya, sidaan horay u soo sheegnay:
Celsius: midka aan aqaano uguna isticmaal badan nahay Yurub, oo leh qabow (0ºC) iyo karkarin (100ºC) oo ah tixraacyo
Fahrenheit: waxaa laga isticmaalaa gaar ahaan wadamada Anglo-Saxon. Dhibcaha tixraaceedu waa qaboojinta isku darka qaboojiyaha ee biyaha iyo milixda, iyo heerkulka jidhka aadamaha. 1ºC waxay u dhigantaa 33,8ºF.
Kelvin: adeegsi cilmiyeysan. Dhibcaha tixraaceedu waa eber dhammaystiran iyo barta saddex-geesoodka ah ee biyaha. 1ºC waxay u dhigantaa 274,15ºK.
Heerkulku wuu kala duwan yahay sida ku xusan joogga, u dhawaanshaha ama masaafada badda iyo dhulbaraha, oraahda iyo sidoo kale dhirta lafteeda (Meelaha dhirta badan leh, dhirtaasi waxay dhaliyaan uumiga biyaha markay sawiraan, taas oo naga caawin karta inaan si fiican ula qabsano kuleylka). Si ballaaran marka loo eego, waxaa jira saddex meelood oo waaweyn oo meeraha ah:
Aag diiran ama kuleyl leh: wuxuu u dhexeeyaa labada kuleyl waxaana loo qeybiyaa dhulbaraha laba aag oo loo siman yahay. Celceliska heerkulka ayaa ka sarreeya 18ºC.
Aag ku meel gaar ah (waqooyiga iyo koonfurta): waxay ka kala baxaan kuleylaha ilaa ulaha. Celceliska heerkulka sanadlaha ah ayaa sii jooga illaa 15 aroundC. Gobollada ku yaal aagga qabow, xilliyada sannadka si wanaagsan ayaa loo qeexaa.
Aagga qabow (ulaha): wuxuu kuyaala inta udhaxeysa Arctic Circle iyo Pole North, iyo Circle Cirifka Antarctic iyo Pole South. Heerkulku ficil ahaan had iyo jeer waa laga ilaaliyaa 0ºC, xitaa wuxuu gaaraa -89ºC.
Iyo dareenka kuleylka?
In kasta oo aaggeenna heerkulbeegga uu calaamadeeyo heerkul gaar ah, haddana waxaa laga yaabaa in jirkeennu uu dareemo wax ka duwan, taas oo markaa noqon doonta waqtiga laga hadlayo dareen kulul. Waa maxay dhab ahaan
Qabowgu dabayshu tahay falcelinta jirka ee cimilada jawiga, Dareenka kuleylkuna waa marka uu dhaafo 26ºC, in kastoo uu aad u kala duwan yahay iyadoo ku xiran xilliga aan ku jirno iyo qofka naftiisa. Sababtaas awgeed, kuwa ku nool cimilo qabow ama qabow uma eka inay aad u jecel yihiin kuleylka qoyan ee badda Mediterranean-ka, kuwa ku nool cimilada kulaylaha ama kuleylka badanaaba way ku adag tahay inay la qabsadaan cimilo qabow.
Xaqiiqduna waxay tahay inta qoyaan badan ee deegaanka ka jirta, kuleylka badan ayaa dareemi doona; oo ka hooseeya waa, wuu ka qabownaan doonaa. Marka, tusaale ahaan heerkul ah 30ºC oo 90% qoyaan leh, waxay dareemi doontaa in haddii heerkulbeegga uu runtii calaamadeynayo 40ºC.
Ma ogeyd xiriirka ka dhexeeya kuleylka iyo heerkulka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Xiriirka ka dhexeeya kuleylka iyo heerkulka
GRASIA WAXAY TAHAY CAAWIMO BADAN
Jawaab MARIA GABRIELA
wax walba way fiicnaayeen waxaan ka fikiray waxa aan kuu soo qoro
MARIA GABRIELA RIANO MENDEZ dijo
RAALIN MAHADSANID INTA BADAN WAA SI AAD U FAA'IIDAYSAN
Jawaab MARÍA GABRIELA RIAÑO MENDEZ
waad qurxoontahay laakiin faalladaadu aad ayey uxun tahay
hindu alaoui dijo
Ma aanan helin wixii aan doonayay, laakiin waxaan rabaa inaan xog ka helo tan, si kastaba mahadsanid 🙂
Jawaab si aad u hesho alaoui
WAAD KU MAHADSAN TAHAY INAAD SI AAD AAD IGU CAAWISO
Ricky Dominguez dijo
haa wax badan ayey i caawisay
Jawaab Ricky Dominguez
Waxba kamaan fahmin
Ku jawaab Krishna
Marka marka kuleyl jiro waxaad dareemeysaa qabow iyo marka qabow jiro kuleyl? MA FAHMIN
Waa salaaman tahay Lolo.
Maya, taasi maahan. Aynu nidhaahno tusaale ahaan inuu jiro heerkul 30ºC leh qoyaan qiyaastiisu tahay 70%, ka dib waxaad yeelan doontaa dareen kulul oo gaaraya 35ºC.
Waxay kuxirantahay boqolkiiba inta qoyaan ee jirta, jirka wuxuu dareemi doonaa hal heerkul ama mid kale.
xiriirkuna muxuu ahaan lahaa?
Waad salaamantihiin xxxccc.
Kuleylku waa nooc ka mid ah tamarta laga soo qaado jirka oo loo gudbiyo mid kale, halka heer kulku yahay muujinta kuleylkaas.
Bilowgii waad qortay kuleylka, taasi waa naxwaha la'aan, waa kuleylka
Maxay bada muhiim u tahay?
Wejigooda kuleylka kuleylka ah ee jawiga ku jira